Soo Iibso Qalab Kaydiyaha Korantada ah ee Maqaarka adag / Callus Remover Qalabka Daryeelka - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Kororka Korantada Dhabarka ah ee Maqaarka Dheer / Dareemaha Maqalka Dheeraad ah
$ 19.64 qiimaha joogtada ah $ 38.50
Nooca: Caafimaadka & Beauty
Kororka Korantada Dhabarka ah ee Maqaarka Dheer / Dareemaha Maqalka Dheeraad ah gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca Item: Qalabka Daryeelka Lugaha
Nooca: Foomka Korontada
Dhaqaalaha iyo cagaarka ilaalinta deegaanka.
Isticmaalka Qoyan & Qalalan, ku habboon isticmaalka iyo keydinta.
Madaxa beddelka kambiyuutarada qashinka waa mid u adkaysata. Laakiin jidhka cutubku ma aha mid u adkaysta biyaha.
Si wadajir ah ula wadaagida beddelka Qalabaynta dheeraadka ah ee dheeraadka ah.
Waxyaalaha caagga ah ee ABS, ka badbaado iyo hufan marka la isticmaalayo dhumucyada birta iyo si sahlan loo isticmaalo marka loo eego dhagax bam ah.
Naqshadeynta Ergonomiga, la qaadi karo iyo fududahay in la isticmaalo.
Bateriga: 2 * Baabuurta AA alkaline (kuma jiraan)
Qalabka korontada laga beddeli karo Korontada Calaamadaha qalabka / qalabka korontada / Xirmada Lugaha / Maqaarka Maqaarka / Callus Maqaarka Maqaarka Maaraynta / Boodka Kala-saarista Battery wuxuu u shaqeeystay qalabkii qalab ee 360, marxalado 40 mar labaad, si tartiib ah oo si wax ku ool ah u dillaacsan maqaarka on dushaha cidhibta, guluubka rinjiyeey si deg deg ah oo si sahlan loo riixo dibadda, maqaarka loo yaqaan call on cagaha. Hirgaliyey mashiinka awoodda badan iyo habdhaqanka ergonomic ka fiican. Si deg deg ah oo si fudud looga saaro hadhuudhka, maqaarka dhintay, maqaarka, qoryaha la xiiray. Cagahaaga ka eegaya oo dareemaya jilicsan oo qumman. Kaliya isticmaalka cagaha iyo cirbadaha, kuma talineyno isticmaalka qalabkaan meel kale oo jirka ah. Xidhmada:
1 X Soo saaraha xayeysiinta ah (Si ammaan ah u duub bacda xumbada)
1 x Beddelka madaxa xoqista
1 x Buunshaha nadiifinta
1 X Buug-gacmeedka Macluumaadka (Fadlan akhri buugga isticmaalaha ka hor intaadan isticmaalin)
1 x Dhuxusha Dharka Mitrooga ah (hadiyad ahaan)
пришло отлично всё работает! Dovolni!
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 5.0 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 97062.
dib u eegista 97062